Fanamboaran-dalana vaovao: 20 miliara ariary ny onitra ho an’izay esorina - ewa.mg
Fanamboaran-dalana vaovao: 20 miliara ariary ny onitra ho an’izay esorina
News - Fanamboaran-dalana vaovao: 20 miliara ariary ny onitra ho an’izay esorina
Mitohy ny asa fanamboaran-dalana avy eny Andranobevava mivoaka any amin’ny By Bass (Rocade avaratra atsinanana sy atsinanana). Hanome endrika vaovao ny tanànan’Antananarivo ny fahavitan’io lalana io, sy hanamaivana ny fifamoivoizana. Hamafisina ny fepetra efa noraisina amin’ny fanalàna ny mponina manodidina, fepetra takin’ireo mpamatsy vola (AFD, Bei, UE)*hampandehanana ny asa, sady tombontsoa iombonana, araka ny fanazavan’ny talen’ny fanajariana ny tany, Rabearimanana.
Anjaran’ny fanjakana ny miantoka ny onitra ho an’ireo rehetra tsy maintsy esorina. 20 miliara ariary ny atokana amin’izany, ho an’izay manan-tany, trano, tanimbary sy karazam-boly hafa, toeram-pivarotana, toeram-piasana, sns. Dingana maro ny atao, manomboka ao amin’ny sampana fanajariana ny tany, mandalo ao amin’ny minisiteran’ny Vola, manefa ny onitra. Ilaina fanamarinana ny fananan-tany, trano, sy izay fitadiavam-bola hafa. Honerana hatramin’ny mpanofa trano. Tombanana amin’ny sandan’ny ankehitriny ny zavatra tsy maintsy ravana, koa arak’izay koa ny vola omen’ny fanjakana.
Tokantrano miisa 1087 sy tany 507 no voakasik’izao fandravana izao. Jerena akaiky ny momba ny trano, tanimbary sy fambolena hafa, asa fitadiavam-bola voatery ravana. 50 % ny onitra efa noraisina tamin’ireo. « Tsy ataon’ny fanjakana ny manavesatra izany, indrindra ho an’ireo sahirana sy beantitra », hoy ny talen’ny fanajariana ny tany, Rabearimanana.
Somary tratra aoriana ny fahazoana onitra momba ny tany sy ny tanimbary noho ny fahasimban’ny boky fanamarinana ao amin’ny fananan-tany, sy ny fahasarotana fanaovana taratasy fandovana. Tany 69 fotsiny izao amin’ireo 507 no voasolo vola. Vahaolana ny fananganana Fitsarana manokana momba ny tany. Hanirahana vadintany sy mpitandro filaminana izay manda tsy mety miala.
L’article Fanamboaran-dalana vaovao: 20 miliara ariary ny onitra ho an’izay esorina a été récupéré chez Newsmada.
Mpandrindra vaovaon’ny ONN: « Mila tsapan’ny isan-tokantrano ny vokatry ny fanjarian-tsakafo »
“Tokony ho tsapan’ny isan-tokantrano ny fiantriakan’ny fanjarian-tsakafo”, hoy ny mpandrindra nasionaly vaovaon’ny Ofisim-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo (ONN), ny dokotera Solofonirina Lucie, omaly, nandritra ny fandraisany ny andraikitra teny Anosy. Tanjon’ny asa rehetra amin’ny ho avy ny fahombiazan’ny asa ho fanatsarana ny andavanandron’ny Malagasy rehetra, araka ny nambarany ihany. Nyu 10 avrily lasa teo no voatendry handray hitantana ny ONN ny tenany ka hisolo toerana an-Raveloharison Ambinintsoa.Nahitam-bokatra azo tsapain-tanana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ka hotohizana izany miaraka amin’ny fandraisana anjaran’ny rehetra.Efa manana traikefa amin’ny fitantanana tetikasa maro izy teny anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ary hitondra izany ho an’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Nisy avy hatrany ny fivoriana niarahany tamin’ny teknisianina samihafa ao anatin’ny ONN.Vonjy A. L’article Mpandrindra vaovaon’ny ONN: « Mila tsapan’ny isan-tokantrano ny vokatry ny fanjarian-tsakafo » a été récupéré chez Newsmada.
FAMPIVOARANA :: Liana amin’ny fanamafisana traikefa hidirana amin’ny asa ireo tanora
Tanora maro no tonga tetsy amin’ny AFT Andavamamba, ny sabotsy lasa teo, nanatrika ny iray andro natokana ho an’ny fampananana asa. Araka ny fantatra, anisan’ny olana tena sedrain’izy ireo ankehitriny ny tsy fahampian’ ny traikefa hahafahany miditra amin’ny sehatry ny asa. “Tanjona amin’ity hetsika ity ny hanampiana ireo tanora tsy ankanavaka, na nahavita fianarana na tsia, mba hahafany manampy traikefa amin’ny fidirana amin’ny sehatry ny asa sy hahalalany bebe koa ny mikasika ny sehatra araka asa”, araka ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra iray, ny sabotsy lasa teo nandritra ny hetsika. Araka izany, tsy natokana ho an’ ireo nahavita fianarana na manana diplaoma ihany ity hetsika ity fa natao ho an’ireo rehetra mangetaheta, na hiasa amin’ny orinasa na hanao asa tena rahatrizay. Tranoheva maro nahitana ireo toeram-panofanana maro samihafa sy ny orinasa ihany koa no hita teny an-toerana ny sabotsy lasa teo. Ankoatra izay, nahaliana ireo tanora tonga teny an-toerana ireo famelabelaran-kevitra izay notanterahin’ny avy ao amin’ny minisiteran’ ny Indostria. Maro be ihany koa ireo liana tamin’ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo tanora sasany efa nahatsangana ny orinasany manokana. L’article FAMPIVOARANA :: Liana amin’ny fanamafisana traikefa hidirana amin’ny asa ireo tanora est apparu en premier sur AoRaha.
Fanafihana mitam-basy teto Toamasina : Tratra ambodiomby tao Andranomadio i Jackson Eddy
Ny sabotsy 29 septambra antoandro dia tovolahy iray tsy nanampo na inona na inona no nosakanana jiolahy teo amin’ny araben’ny fahaleovan-tena eto Toamasina. Avy hatrany dia voambana basy PA ity tovolahy ity ka lasa tamin’izany ny moto sy ny vola 400.000 ariary tany aminy nandritra izany. Taorian’izay dia nametraka fitoriana avy hatrany teny amin’ny polisy ilay tovolahy, tsy nisaron-tava rahateo ireo nandrava azy niaraka tamina basy nandritra izany ka tadidiny tsara. Raha naharay ny fitoriana ny polisy dia nanao ny fikarohany noho ilay fandravana nisy fanambanana basy, ka ny alakamisy 16 novambra teo dia nahazo loharanom-baovao izy ireo fa misy moto tsy ara-dalana sy mampiahiahy entin’olona ao Andranomadio P/elle 11/41. Avy hatrany dia noraisin’ny polisin’ny FIP an-tanana ny fanaraha-maso ity moto tsy ara-dalana sy ny mpitondra azy ity, ka teo no nahalalana fa ilay moto nisy nandroba teo amin’ny araben’ny fahaleovan-tena ny volana septambra teo ilay izy. Raha natao ny fisamborana dia tratra nandritra izany Ingahy Jackson Eddy, ilay nanambana basy ity tovolahy teny amin’ny araben’ny fahaleovan-tena. Tafaverina amin’ny tompony ihany koa ilay moto ankehitriny. Miatrika ny fakana am-bavany azy Ingahy Jackson Eddy mamaly ireo fanadihadiana ataon’ny polisy azy mikasika ny halatra vitany sy ny momba ilay basy nampiasainy. Ankilan’izay dia ny alin’ny talata 13 novambra teo dia entan’ny tovolahy iray tonga eto Toamasina avy any Antananarivo namonjy fodiana tao Tanambao V, no nentina posy bisikileta nitsoaka. Mpanamboatra finday ilay very entana ka lasan’ity mpitondra posy ity avokoa ireo findain’olona hamboarina tany aminy nandritra izany. Taorian’ny fitoriana nataon’ilay tovolahy dia nanomboka ny fanaraha-mason’ny polisin’ny FIP, ka tratra tao amin’ireo mpivarotra alina, “bazarim-bolondolo”, Ambolomadinika, ny alakamisy 15 novambra teo, ireto entana very nentin’ilay mpitondra posy bisikileta nitsoaka. Manao antso avo hatrany ny polisy sy ny mpitandro ny filaminana ny tokony hahamailo mandrakariva ny rehetra fa tsy kely lalana sy tsy lavitra ny tsirairay ny jiolahy izao. Malala DidierL’article Fanafihana mitam-basy teto Toamasina : Tratra ambodiomby tao Andranomadio i Jackson Eddy a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tranoben’ny fifandraisana: tale jeneraly I Fanjanarivo Symonette
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin’ity herinandro ity, voatendry ho tale jeneralin’ny Tranoben’ny fifandraisana eny amin’ny oniversite i Fanjanarivo Symonette Pascaline. Efa mpanao gazety an-tsoratra matihanina an-taony maro izy nialoha ny naha voatendry azy amin’izao toerana izao.L’article Tranoben’ny fifandraisana: tale jeneraly I Fanjanarivo Symonette a été récupéré chez Newsmada.
Fampitahan’ ny “Emergence” ny IEM sy ny Map II: “Aoka hampiakarina ny lentan’ny adihevitra hatao”
Nanazava ny fomba fijeriny amin’ny fomba mahitsy ny vina sy ny fandaharanasan’ny kandidà roa: Ravalomanana sy Rajoelina, ny eo anivon’ny Emergence Madagascar, tarihin-dRaboanarijaona Olijaona, omaly tetsy Antaninarenina. Niantso ny rehetra anefa ny tenany, indrindra ireo tsy nandatsa-bato tamin’ny fihodinana voalohany, mba hifidy mazava ny fandaharanasa hita fa mahasoa ny firenena sy ny vahoaka ary hampiakatra ny fari-piainan’ny Malagasy manontolo. Eo koa ny antsony ho an’ireo mpitarika politika sy mpanohana hanabe ny mpikatroka ao aminy ahafahana mametraka adihevitra miompana amin’ny fandaharanasa. “Hiakaran’ny adihevitra mandritra ny propagandy ary hialana amin’ny fifampihantsiana tsy mitondra voka-tsoa ho an’ny firenena”, hoy izy. Nanteriny fa ho an’ny tombontsoan’ny firenena sy ny hoavin’ny taranaka izany. Nitondrany fampitahana ny vinan’ny kandidà laharana faha-13 sy ny laharana faha-25 ao amin’ny IEM sy ny Map II, eo amin’ny lafiny toekarena sy ny fihariana. Ny sandam-bola sy ny indostria. Eo koa ny fandraharahana sy ny indostria ary ny fifandraisana iraisam-pirenena… Synèse R. L’article Fampitahan’ ny “Emergence” ny IEM sy ny Map II: “Aoka hampiakarina ny lentan’ny adihevitra hatao” a été récupéré chez Newsmada.
FENO NY KAPOAKAN’NY MPONINA :: Hitohy amin’ny hetsika goavana ny fitakiana ny tsy fisian-drano eny Itaosy
Fanairana faobe. Hihamafy ireo hetsika hotanterahin’ireo mponina eny Itaosy manom- boka anio manoloana ny tsy fisian’ny rano eny an-toerana. Hanao fitokonana fanairana hitambarana izy ireo mandritra izany. “ Manome fotoana ny tompon’andraikitra izahay mba hamerina ny fandefasana ny rano hatramin’ny anio. Raha tsy mbola tafaverina ao ao anatin’izay fotoana izay ny rano dia hiroso amin’ ny fitokonana fanairana faobe izahay”, araka ny fanazavan’ny solontenan’ ny mponina eny Ambohidrapeto, omaly. Ny mponina teny amin’ity kaominina ity izay efa nanamafy ny hetsika nataon’izy ireo tamin’ny sabotsy lasa teo manoloana ny siniben-drano eny an-toerana. Nandritra ny adiny iray sy sasany ny faharetan’ny hetsika. Fahatapahan-dalana Milaza ny hiroso amin’ ny fanapahan-dalana ireo mponina, araka ny fana- zavana, raha mbola tsy misy ny vahaolana. Tsy ireo mpanjifa ao amin’ny kaominina Ambohidrapeto ihany fa ho tonga hanotrona ny hetsika ihany koa ny avy ao amin’ny kaominina Ambavahaditokana, Andrano- nahoatra, Fiombonana, Ankadimanga ary Itaosy. Eo amin’ny siniben-drano eny an-toerana ihany no hanatanterahan’izy ireo ity hetsika ity. Tsiahivina fa efa ho efa- bolana izay ireto mponina ireto no tsy nahazo famatsian- drano intsony avy amin’ ny Jirama. Efa nitady vahaolana izy ireo toy ny fakàna rano any an-tanimbary saingy efa tsy maharaka intsony izany ankehitriny. “ Efa ilaharana ihany koa ny rano any an-tanimbary. Tsy misy vahaolana afa-tsy ny fiverenan’ny famatsiana avy amin’ny Jirama ihany”, hoy ny fanazavan’ny renim-pianakaviana iray monina eny an-toerana. Efa nandefa “Citerne” ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama hanampiana ireo mpanjifany eny an-toerana amin’ny alalan’ny fizarana rano. Manamafy anefa ireo mponina fa tsy maharaka ny filàna ny rano voazaran’ny “citerne”, satria voafetra ihany ny anjaran’ny tokantrano tsirairay amin’izany. Araka ny fanazavan’ireto farany, ny fikarakarana sakafo ihany no vitan’ity rano zaraina ity ary tsy mahasahana ny filàn’ny fianakaviana ao anatin’ny iray andro izany. L’article FENO NY KAPOAKAN’NY MPONINA :: Hitohy amin’ny hetsika goavana ny fitakiana ny tsy fisian-drano eny Itaosy est apparu en premier sur AoRaha.
Sehatra bà gasy: fahombiazana ny « Fety sy valo » voalohany
Manamarika ny 10 taona nijoroany ny Sehatra bà gasy, vovonana ivondronan’ireo tarika mpiangaly sy mpankafy bà gasy. Hetsika lehibe hanombohana ny fanamarihana izany sy ho tsangambaton’ity tsingerin-taona ity ny « Fety sy valo bà gasy », notanterahina ny 31 mey hatramin’ny omaly, teto an-dRenivohitra.« Fety, satria volan’ny fety ny volana jona. Ao anatin’izany ny fetim-pirenena, ny fetin’ny ankizy, ny famaranana ny fararano. Ny hoe valo kosa, isa manan-danja ho an’ny Malagasy. Azo itarafana izany ny hoe trano valozoro na trano miezinezina, ny taolambalo izay midika fa tsy atao tsinontsinona ny razana, ny lafivalo, izay mifandray amin’ny hoe fety ho an’ny rehetra ny “Fety sy valo bà gasy”, hoy ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny Sehatra bà gasy, Rasolondraibe.Angatahana fiaraha-miasa amin’ny rehetra ny hanatanterahana ny “Fety sy valo bà gasy” isan-taona, hanandratana ny zavakanto malagasy, araka ny nambaran’ity filohan’ny fikambanana ity hatrany. Nosantarina tamin’ny “Takarivan-danonana » ny hetsika, ny zoma teo teny amin’ny IKM Antsahavola.Ny asabotsy kosa, nisy ny fampirantiana narahin’ny seho, tetsy amin’ny Tahala Rarihasina. Nifandimby niaka-tsehatra kosa ny tarika mpikambana miisa 35, omaly tetsy amin’ny CC Esca Antanimena.Landy R. L’article Sehatra bà gasy: fahombiazana ny « Fety sy valo » voalohany a été récupéré chez Newsmada.
Filoha Rajoelina: « Homeko “prime” izay mahazo medaly »
« Izay mahazo medaly na volmena na volafotsy sy alimo, homeko medaly manokana rehefa tafaverina any an-tanindrazana”. Io ny fampanantenana nataon’ny filoham-pirenena Rajoelina Andry nandritra ny fitsidihany ireo atleta ao amin’ny hotel Victoria Maorisy, ny faran’ny herinandro teo. Nampirisika ireto atleta ireto hiady mafy sy hiady hatramin’ny farany ny tenany satria isika no Nosy lehibe indrindra raha mitaha amin’ireo Nosy mpifanandrina. “Tsy maintsy lohany isika”, hoy izy, ary tsy maintsy mandresy manomboka izao.“Hovaintsika amin’izay ny tantara”, hoy hatrany ny filoha. Fantatro, hoy izy, ny fijalianareo rehefa hiatrika fampivondronana sy handeha hivoaka any ivelany handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena noho ny haratsian’ny sakafo, ny trano hipetrahana ary ny tsy fahampian’ny hoenti-manana. Ny fanatanjahantena anefa, hoy hatrany ny filoha, ny hahitana ny endrika sy herin’ny firenena iray. Tsapako fa ny tsy fahampiana no nahatonga izany taloha ka manomboka izao, hampiana ianareo, tsy hiandry ela fa efa hatomboka izao ny fanomanana ny “Lalaon’ny Nosy 2023”. “Hahazo “bourse” isam-bolana ihany koa ny atleta matihanina, hampiana ny feserasiona, hahafahana mampandroso ny taranja”, hoy hatrany ny filoham-pirenena. Mi.Raz L’article Filoha Rajoelina: « Homeko “prime” izay mahazo medaly » a été récupéré chez Newsmada.
Fampiofanana: mampitombo traikefa etsy Ampefiloha ireo DRJS vaovao
Ho fampitomboana ny traikefan’ireo Talem-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahantena (DRJS), manerana ny faritra 22 eto Madagasikara, manaraka fiofanana eny amin’ny ANS (Académie Nationale des Sports) Ampefiloha, izy ireo, nanomboka omaly ary hifarana anio. Fampiofanana, hampahafantarana azy ireo ny firafitra eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena ary ny karazana sampan-draharaha rehetra mijoro. « Rariny loatra ny fampiofanana toy izao, ho an’ireo Talem-paritra vaovao ireo, indrindra amin’izao fanendrena vao tsy ela izao », raha ny nambaran’ny Sekretera Jeneraly ny MJS, Ralaivao Lovatiako. Tsiahivina, iray volana latsaka kely izay no nanendrena azy 22 mianadahy, hisahana ny fitantanana ny Tanora sy ny fanatanjahantena eny anivon’ny faritra misy azy ireo tsirairay avy.« Mila miasa haingana ary misy ireo asa mila vitaina avy hatrany, mila mandefa faran’izay haingana ny zava-misy any amin’ny faritra misy azy ireo tsirairay avy, hahafantarana ireo olana mila vahana», araka ny nambaran’ny SG ny MJS. Hisy ny fanaraha-maso ny asa vita sy hitarafana ny zava-bita, afaka telo volana, raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra an’Andriamatoa Sekretera Jeneraly, isan’ny hitondra sy hizara ny traikefany amin’ireto talem-paritra miisa 22 ireto ireo Tale isan-tsokajiny, avy eo anivon’ny MJS, ny Tafita ary ny Akademia Nasionaly. Mi.RazL’article Fampiofanana: mampitombo traikefa etsy Ampefiloha ireo DRJS vaovao a été récupéré chez Newsmada.